မနေ့နေ့လယ်၁နာရီခွဲလောက်က အိမ်မှာဘယ်သူမှမရှိတုန်းအိမ်ထဲခိုးဝင်တယ် သူ ph ခေါ်တာကိုမကိုင်လို့ဆိုပီး ဆွဲလှဲပီးပါးရိုက်တော့ ကိုယ်ကပြန်ပြောတယ် – Burmese Online News
အတင်ဆွဲခေါ်ပီး မနက်ကph silentလုပ်ထားတုန်းသူphခေါ်တာကိုမကိုင်လို့ဆိုပီး ဆွဲလှဲပီးပါးရိုက်တော့ ကိုယ်ကပြန်ပြောတယ်(နင်ငါ့ကိုအသားနာအောင်လုပ်တာများနေပီ အဲ့တော့ငါနင်နဲ့ဆက်မတွဲနိုင်တော့ဘူး ငါခွင့်မလွှတ်နိုင်တော့ဘူး နင့်မိဘ‌တွေလဲ နင့်ကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲရလိမ့်မယ်) လို့ပြောတော့။ (နင့်စောက်ပေါက်ပိတ်ထား) လို့အော်ပီးပါးတေချည်းလိမ့်ပိတ်ရိုက် လက်သီးတေနဲ့ထိုး ပတ်ဝန်းကျင်ကြားအောင် အော်မယ်လုပ်တော့ ဆံပင်ကနေဆွဲပီး အိမ်နောက်ထိ ဒရော့တိုက်တွဲသွားပီး လည်ပင်းကနေတက်ခွတယ် နောက်ပီး ပါးစပ်ထဲကို ပုံမှာပြထားတဲ့ပုဆိုးနဲ့ဆို့ပီး နှာခေါင်းရော ပါးစပ်ပါပိတ်ထားတဲ့အပြင် လည်ပင်းပါအသေညစ်ထားတာ အသက်ကမရှုနိုင်တော့ဘူး အလူးအလဲဖြစ်နေပီ သူလွှတ်များလွှတ်လိုက်မလားဆိုပီး နီးစပ်ရာဖြစ်တဲ့သူ့လက်‌ချောင်းကိုဖမ်းကိုက်လိုက်တယ်
ဘေးအိမ်ကဦလေးကြီးက မနေနိုင်တော့လို့ အပေါက်သေးသေးလေးက လှမ်းချောင်းတဲ့အချိန်ကျမှ တစိမ်းလူမှန်းသိလို့ လမ်းထဲကလူတေစုပီးအတင်းသောင်းကျန်းပီး တံခါးအတင်းဖွင့်ခိုင်းမှ ပြေးမလွှတ်တော့မှန်းသိလို့ ငိုယိုပီး (သဲလေးရယ်ကယ်ပါအုံး ကိုကိုမလုပ်ပါဘူးလို့ပြောပေးပါ)ဆိုပီးကူပြောခိုင်းတာအာ့နဲ့ ရပ်ကွက်ဘူကြီးတေရောက်လာတော့ သူ့ကိုဝိုင်းရိုက်မယ်လုပ်တာ ကိုယ်ထိုင်နေတဲ့ဆီကိုပြေးလာပီး(သဲလေးရေ ကယ်ပါအုံး မရိုက်ကြပါနဲ့လို့ ကူပြော‌ပေးပါအုံး)ဆိုပီးထပ်ပြောခိုင်းတာ လူတေဝိုင်းရိုက်ခါနီးကျမှ ‌ခြေသလုံးဖက်ပီးခေါင်းကို ကိုယ့်ဆီအပ်ထားတာ ကိုယ်ကပဲ သနားပီး (မရိုက်ကြပါနဲ့ဦးလေးတို့ရယ် ဒီအတိုင်းပဲ ဖမ်းခေါ်သွားကြပါ)လို့ပြောမှ အေးအေးဆေးဆေး ခေါ်သွားပေးတာ
အဲ့ဒါရုံးရောက်တော့လဲ ကိုယ်ကစပီးကိုက်လို့ သူကရိုက်ပါတယ်ဆိုပီး ကလိမ်ကျတယ် ? စခန်းမူးနဲ့ ရဲတေအားလုံးကိုလဲငွေလိုက်ထိုးပီး အမူမဖွင့်အောင် အမျိုးမျိုးလိုက်တားတယ် သူ့သားလက်ကလေးကို ကိုက်လိုက်လို့ပြန်ပီးအမူဖွင့်အုံးမယ်ဆိုပဲ ? ရဲတေကလဲ စားထားသောက်ထားရတော့ တရားလိုကတောင် ပြန်အဟောက်ခံနေရတဲ့ ဘဝမျိုးပါ? အဲ့ဒါအခု ကိုယ်ကလဲမတရားခံရတယ် သူတို့ဘက်ကလဲ ကိုယ့်အမှားကိုယ်မမြင်ကြပဲနဲ့ ပူးပေါင်းကြံစည်ကြတယ် ? တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိပါစေ။ တစ်ထောင့်တနေရာကနေ အကူညီလေးဖြစ်အောင်ဝိုင်း shareပေးကြပါနော် ? TU မှော်ဘီက friတေ အဓိကကူညီပီး share ပေးစေချင်ပါတယ်ရှင့်?
Credit-May Phyo Kyawt
လာမည့် ၃ ပတ်အတွင်းရှယ်ယာများပြန်လည်မ၀ယ်ယူပါကတာဝန်ရှိများကိုတရားစွဲဆိုမည်ဟု YUPT ရှယ်ယာရှင်များပြော
မန္တလေးတွင် ဘဏ်မန်နေဂျာ အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ၎င်း၏ အမျိုးသားနှင့် ပူးပေါင်းကာ ATMစက်အတွင်းမှ ငွေကျပ်သိန်း(၃၀၀)ကျော် ထုတ်ယူဖောက်ထွင်းမှုဖြင့် အမှုဖွင့်ခံရ
ဘုန်းဘုန်းကြီး အရှင်ဆေကိန္ဒက ဓမ္မာစရိယနှင့်ပထမပြန်စာစစ် သံဃာတော် အပါး ၂၀၀ ကို တစ်လတိတိ ဆွမ်းဆပ်ကပ် လှူဒါန်း
မြမြရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာ ပါဝင်မရိုက်ဖြစ်တော့တဲ့ အကြောင်းအရင်းကို ပြောပြလာတဲ့ ဖြိုးမြတ်အောင်